5 Mistakes we possibly made every day - Wall Street English Tunisia
5 Mistakes we possibly made every day
အမှားအများဆုံး နေ့စဉ်အသုံးအနှုန်း (၅) မျိုး
(1) I wish youanice day/ I wish you haveagood day
ပုံမှန်အားဖြင့် wish ရဲ့အနောက်မှာ verb မပါတဲ့ noun/ noun phrase တွေကိုရိုးရိုးလေးပဲ သုံးနှုန်းပြောဆိုကြပါတယ်။ ခရစ်စမတ်သီချင်းဖြစ်တဲ့ “We wish youamerry Chirstmas” မှာ အလွယ်တကူသိနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် I wish youanice day က အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
(2) Do you know how to spell….?/ How to spell “….”?
စာလုံးဘယ်လိုပေါင်းလဲသိပါသလား (Do you know how to spell) နဲ့ စာလုံးဘယ်လိုပေါင်း လဲ (How to spell) မှာ How to spell…? ဆိုပြီးပြောကြတာများပါတယ်။“Do you know” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချန်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် Formal English မှာရှုပ်ထွေးတဲ့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် စေမှာဖြစ်လို့ Do you know how to spell ဆိုပြီးအပြည့်အစုံပြောဆိုသင့်ပါ တယ်။
(3) I like it very much./ I very like it.
Very ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Adjectives ဒါမှမဟုတ် adverbs for emphasis ရဲ့ရှေ့ မှာထား ပြီးသုံးကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် very happy တို့ very quickly တို့ပါ။ Verb ရဲ့အဓိပ္ပါယ် ပိုမို ထင်ရှားစေဖို့ very much ဆိုပြီး verb ရဲ့နောက်မှာထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် I like it very much က အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
(4) Like နဲ့ Feel အသုံးအနှုန်း
ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမေးမယ်ဆိုရင် How do you like…? ဒါမှမဟုတ် What do you think about .? ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုကတော့ မှားယွင်းစွာပဲ How do you feel about..? လို့ အစချီပြီးတော့သုံးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ feel about..? ဆိုတာ က တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ emotion ဆိုင်ရာမှာသာ သုံးနှုန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
(5) Thank you for/ about
တစ်စုံတစ်ခုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့အခါ Thank you about your… ဆိုပြီးမှား ပြောတတ်ကြပါတယ်။ Thank you for your ကသာလျှင် အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေက လွဲနေတတ်ပါတယ်
Wall Street English ရဲ့ အတန်းချိန်တွေမှာတော့ ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးနေပါတယ်။